Umdladla webhere: imiphumela yeBrexit | Ezezimali Zomnotho
Umdladla webhere: imiphumela yeBrexit
Ezezimali Zomnotho | | Ibha
Futhi ekugcineni, kwafika. Namuhla ngolunye lwalezo zinsuku lapho into enhle kakhulu ongayenza ukucisha ikhompyutha bese ungayivuleli elinye isonto. Ukuvulwa kuvulwe ngegebe le-movie elinyantisayoNgakho-ke bonke labo abafunda lezi zindaba kusempondo zankomo bagijima bayomisa bababhubhisa, ngoba ama-oda aphonswa emakethe ngoba akukho okuthenjiswayo. Lapho kwenzeka into enjengale akukho lutho olwake lwathintwa kuze kube yilapho imakethe ijwayelekile, okuzothatha izinsuku ezimbalwa. Isibonelo: iBME, ivalwe ngayizolo ngama-25.5 euros / share futhi yavula ngama-21.64 euros / share, lelo yigebe le-10%, akukho lutho olwake lwenziwa ngoba wonke umuntu ubeka imakethe futhi amise ama-oda, kepha ngegebe bayaguqulwa ukumaketha. Inani livalwe ngama-euro angama-24 / isabelo, futhi ngalokho, konke.
Okubi ngalezi zimo ukuthi lezi zindaba zenzeka emakethe evaliwe. Ngenkathi kwenzeka imibhoshongo yamawele kimi, okusobala ukuthi ngangivele ngitshale imali emakethe yamasheya ngaleso sikhathi (bengineminyaka embalwa njengoba ubona), bekuyimakethe evulekile. Kwakunezinsuku ezimbalwa zokuwa, ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula ukuthi imakethe yaseMelika ivaliwe izinsuku ezintathu. Ushaye ukuwa okuhle, kepha namuhla uphakeme kakhulu. Sasizungeze i-1400 ku-SP500 futhi namuhla kungamaphuzu angama-2037. Umhlaba awuphelanga ne-USA nomhlaba wakhula. Well manje okufanayo. Umhlaba ngeke uphele, kodwa qiniseka ukuthi bashaya izimakethe, futhi bazoqhubeka nokwenza kanjalo, lokhu akwenzeki ngosuku olulodwa.
I-Brexit hit ifika ngesikhathi esibi emnothweni wase-Europe. Njengoba kwenzekile e-USA nakumawele tower, lokhu kuhlasela kwenzeke ngesikhathi esibucayi emnothweni, kwaba yimbangela yenkinga nokwehla komnotho. EYurophu ngokufanayo, ukukhishwa kweBrexit kwenzeka ngomzuzwana intekenteke kakhulu eYurophu. Kakade ukwehliswa kwemali, ngamazinga aphezulu okungaqashwa emazweni angaphandle, kanye namazwe afana neSpain lapho singaphumanga khona enkingeni lokhu kuzosithinta. Into yokuqala ukuthi ukwehliswa kwesilinganiso kuthinta zonke izinkampani ezikhona, okungukuthi, izinkampani esiziphatha kuphothifoliyo yethu ezinamabhizinisi lapho Telefónica, Banco de Santander, Iberdrola, IAG, Ferrovial, njll ... kuzothinteka ngokusobala kuzisekelo zabo. Lokho kuyinto yangempela.
Kuyinto a uhlanya lwezezimali sebenzisa lokho abakwenzile. Iminyaka engama-50 yokuziphendukela kwemvelo ibuyiselwe emuva ngalesi sinqumo. Akunangqondo emhlabeni ukuthi siphila kulinganiswa kanjena. Manje konke kuthintekile, izinkampani nabantu. Sengivele ngazi izinkampani ezicabanga ukuthuthela kwamanye amazwe. Abantu ojwayelene nabo abasebenza eLondon sebevele bafuna indawo entsha abazoshiya kuyo. Okubaluleke kakhulu, into ephindaphindwayo yemali, lapho imali isakazeka khona kakhulu ngoba imali inamandla, inyamalala kancane kancane. Lokho amandla amaNgisi okuya ezindaweni ezishibhile njengeSpain ukuchitha ihlobo sekuphelile, ngakho iSpain izothinteka. Izothinta umhlaba wonke, lokhu akusizi muntu. Ngenxa yomuzwa wokushisekela izwe nokubandlulula ngokobuhlanga, umhlaba wonke uzolinyazwa, futhi babe ngabokuqala. Abantu abaningi bokufika bazohamba, futhi kanye nabo, izinkampani eziningi ezinamabhizinisi lapho. Ngokombono wezomnotho, lesi sinqumo besingeke sibe sibi kakhulu.
Kodwa ingabe umhlaba uyaphela? Angicabangi kanjalo. Akugcinanga lapho kuqhuma ibhamuza le-dot com, noma ngo-11/11, 11M, XNUMXJ, noma ngokugqashuka kwe-subprime kanye ngeke kuphele manje. Kuyabonakala ukuthi lokhu ingeza ukungaqiniseki futhi yelula ukutakula eYurophu isikhathi eside. I-ECB inenkinga enkulu. IYurophu esivele ithintiwe futhi isigamu sishonile, sebethule umcibisholo kulayini wokuqala wamanzi. Amabhange aphakathi azama ukugcina iphawundi njengoba linjalo, kepha ngibona kunzima. Isikidi sizohlisa amandla sithinte yonke into. I-ECB manje sekufanele isuse konke enakho, akufanele ishiye noma yini inyuse umkhono wayo. Isimo somnotho eYurophu manje sibucayi, ngakho-ke uma unokuthile okusele, kukhiphe manje. Kufanele wandise ibhalansi ngangokunokwenzeka, noma kunjalo Angicabangi ukuthi kufanele noma yini, kepha hheyi, yisilinganiso sokugcina onaso.
Nokho, lokho okukodwa, kuthiwani ngathi? Yebo, sibuyela kungqikithi efanayo njalonjalo, ezinye izinkampani ziyakuthinta, kepha ezinye azikuthinti kangako. BME, Enagás, REE, Mapfre, abathinteki kangako. Singamaphoyinti angama-7700 we-Ibex, ngoFebhuwari kuphela. Ake sicabange ngokunengqondo. Yisiphi isimo esibi kakhulu, Amaphuzu angama-6000 e-Ibex? Lokho ukwehla okungama-20%, kepha ngonyaka owedlule besikumaphuzu we-Ibex ayi-11500 XNUMX. Engiqonde ukukusho ukuthi umhlomulo wobungozi ubuyisela ngokucacile ukuthenga. Izinkampani zihlala zinjalo yize ezinye zithintekile yiBrexit, kepha siyaqhubeka ngesimo esifanayo, sifaka ku-0.5% kanye nemikhiqizo yezabelo 8% ku-BME, 5.32% Enagás, 6.7% Mapfre, 4.45% REE, Ukutshalwa kwemali emholweni oguquguqukayo kuyaqhubeka nokubusa ngaphezu kwemali engenayo engaguquki, lowo mehluko ngaphezulu kwalokhu uya ngokuya uba mkhulu.
Engifuna ukukusho ukuthi Izikhathi ezinjengalezi zisusa ubungozi. Kunzima kimi ukukholwa ukuthi ukutshala imali kuma-7700 Ibex amaphuzu eminyakeni engama-30 kuzohamba kabi. Ngikuthola kunzima ukukholelwa, kuzothatha isikhathi eside ukululama, lokho kuyabonakala, ngoba lokhu akuzange kwehliswe yinoma ngubani, kepha umhlaba uzoqhubeka nokusebenza, ilanga lizoqhubeka liphume, nezinkampani zizoqhubeka nokwenza imali. Lokhu ngikuthatha njengesinye isigaxa emgwaqeni, kubalulekile, kepha akukho okuguqukayo.
Ngezansi kwamaphoyinti angama-7657 Ibex, iphothifoliyo yami iya ekulahlekelweni. Ukuthola okuningi kula mazinga ngicabanga ukuthi kuyindlela enhle. Abaziyo bathi kufanele uthenge uma kunegazi emigwaqweni, nakhu sekukhona, manje isikhathi. UMaster Kostolany uthe: "Thenga ngomgqomo, uthengise nge-violin". Hhayi, njengamanje badubula phansi.
Kepha-ke, manje njengoba abathengisi sebonakele, ngoba bambalwa abasalile, yidlanzana elincane elashoda ekupheleni kwayizolo ngokwesaba okukhulu kunamahloni, namuhla liphuma emaphephandabeni lithi selishayile inkundla. Ilotho leyo, hhayi isikhwama, ilotho. Thina Thenga futhi ubambe ama-inverter lokhu akusithinti, amanani ashibhile futhi asivumela ukuthi siqhubeke nokuthenga amasheya amaningi ngemali encane. Kepha-ke, noma ngubani onamathele esikrinini futhi abone -10% wephothifoliyo ngosuku olulodwa uzobe esaba. Ngizoqhubeka ngithenge, futhi manje ngaphezu kwakho konke kushibhile. Zonke izinzuzo zizophinde zitshalelwe phansi, imali entsha futhi, nemali yokuyeka abanginike yona, ekhipha u-0.2% ebhange, nayo izobonakala emphakathini. Kula mazinga ngifana nengane esitolo se-jelly bean, ngicabanga ukuthi yikuphi okungcono.
NgoLwesihlanu ngibeke ukuthenga kwaBME ngama-24 euros / share cishe ngasekugcineni futhi ayizange ingene, ngakuhoxisa, kepha ngizoqhubeka ngizame ukuthenga okungabizi kakhulu. Isikhathi sokuyothenga noma ngabe obhekana nakho kungukwesaba, ukukhungatheka, ukwenza isinqumo, isithukuthezi, ukungezwani, njll. Khumbula ukuthi njengabatshalizimali sinesithakazelo kumanani aphansi. Kubonakala sengathi abanye abantu bayakhohlwa izinto ezithile.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Umdladla webhere: imiphumela yeBrexit
Yini imali ebekiwe yasebhange